“Can 2019” – ½-dalana: hifandona ny Senegaley sy i Tonizia | NewsMada
“Can 2019” – ½-dalana: hifandona ny Senegaley sy i Tonizia
Hotanterahina, rahampitso alahady, ny lalao manasa-dalana, hiadiana ny amboara an’i Afrika, taranja baolina kitra, tanterahina any Egypta. Hifandona ny Senegaley sy i Tonizia, hifanandrina etsy ankilany kosa i Alzeria sy i Nizeria.
Amin’ny 6 ora hariva, ora any Egypta, ny hifanandrina ny ekipa senegaley sy i Tonizia, ao anatin’ny lalao manasa-dalana, hiadiana ny amboaran’i Afrika. Ireto ekipa roa ireto izay tafiditra ao anatin’ny ekipa henjana indrindra amin’ity “Can” ity. Tsahivina fa tafakatra amin’izao dingana izao ny Senegaley, taorian’ny fandresena azony nanoloana ny ekipan’i Bénin, tamin’ny alalan’ny isa 1 no ho 0. Tetsy ankilany, nandresy an’i Madagasikara, tamin’ny isa 3 no ho 0, kosa ry zareo Tonizianina ka nahazo ny tapakila ho amin’ny manasa-dalana.
Ho an’ny lalao manasa-dalana faharoa kosa, amin’ny 9 ora alina, rahampitso, ny hifanandrinan’i Nizeria sy i Alzeria, ireto ekipa roa ireto izay samy nivoaka sempotra nanoloana ny mpifanandrina taminy. Raha hiverenana ny lalao ampahefa-dalana natrehin’izy ireo, nisaraka tamin’ny isa 2 no ho 1, nanoloana ny ekipan’i Afrika Atsimo, i Nizeria, tetsy andaniny, isa 1 no ho 1 ny nisarahan’i Côte d’Ivoire sy i Alzeria ary tamin’ny alalan’ny “tir au but”, tena nampitaintaina tokoa, no nahazoan’ity farany ny fandresena ka nahatafakatra azy ho amin’ny manasa-dalana.
Sénégal 1 – 0 Bénin
Nizeria 2 – 1 Afrika Atsimo
Côte d’Ivoire 1 – 1 Alzeria (3-4 tab)
Tonizia 3 – 0 Madagasikara
Fandaharan-dalao ½-dalana :
6 ora hariva: Sénégal vs Tonizia
9 ora alina: Nizeria vs Alzeria